Koowheel 2nd မျိုးဆက်က e-စကိတ်စီးပထမဆုံးစီးနင်း - Jomo နည်းပညာ Co. , Ltd မှ
မင်္ဂလာပါ ~ ကြောင့် Koowheel2ကြိမ်မြောက် မျိုးဆက် လျှပ်စစ်စကိတ်စီး Kooboard ဘဝမှာပထမဦးဆုံးလျှပ်စစ်စကိတ်စီးသည်, ငါမရှိသလောက်ထိုကဲ့သို့သောစျေးကြီးကစားစရာဝယ်ဖို့ပိုက်ဆံဖြုန်း (အပြင်, ... "ကောင်းသောအကြောင်းရင်း" နှင့်အတူလမ်းကြောင်းစက်ဘီးဝယ်) ဒါကြောင့်ငါခဲ့သည် ပန်းခြံသွားဖို့စိတ်အားထက်သန်။ ထိုအခါငါကနာကျင်ဖြစ်ပါသည်အဘယ်ကြောင့်နောက်ပိုင်းတွင်ကျနော်ရှင်းပြသည်မိုင်အကွာအဝေးအကွာအဝေးစမ်းသပ်မှုပြီးဆုံးရန်အလွန်နာကျင်ခဲ့ပါတယ်။
စုစုပေါင်းဝန် koowheel လျှပ်စစ်စကိတ်စီး ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် 58.5KG + ခန္ဓာကိုယ်ကာကွယ်မှု device ကို 1.6KG + Ultra-ပေါ့ပါးပြေးဖိနပ် 0.2KG + 960ml ရေ + 1KG မိုဘိုင်းဖုန်းသော့နှင့်အပျက်အစီးအစအန 0.6KG နှင့်အတူ 61.9KG ဖြစ်ပါတယ်။
မနေ့ကနေ့လယ်ရာသီဥတုကအတော်လေးပူပြင်းခဲ့တယ်, အ Riverside မှပန်းခြံဖို့စကိတ်စီးယူချင်ခဲ့ပေမယ့်နီးကပ်လွန်းမိသားစုညစာအချိန်ဖြစ်သောကြောင့်, ကကြိုးစားရန်တာတမံအနီးကိုသွားခဲ့ရတယ်။ မိုဃ်းမလင်းမှီမှာ, ပန်းခြံများလွန်းသောလူရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်အရှိန်နှင့် deceleration အကြောင်းကို 5:30 pm အချိန်မှာကျွန်မရဲ့မိသားစုကပြန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်, ဒီအချိန် 55 မိနစ်ကို ယူ. အလွန်မကြာခဏဖြစ်ကြသည်။
ထိုအပြီးနောက်ငါ့မိသားစုနှင့်အတူညစာခဲ့ရပြီး9နာရီလောက်မှာမှာ Riverside မှပန်းခြံ, ဒီအချိန်ပြန်လာသည့်နင်းသာကြိုကြားကြိုကြားအပြေးသမားနှင့်အတူဒါကြောင့်နှစ်နာရီနှင့်တစ်နှစ်ခွဲစီးနင်းသည့်ခဏ accelerator, ခံစားရန်ပိုသည်ဖြည်းဖြည်းလမ်း, ဒီအချိန် play ။
ညနေခင်းတွင် 10.68KM ချော်။
ညဦးယံ၌ကိုးနာရီ, တဖန် 28.76KM ချော်။
ပျမ်းမျှအမြင့် 26 မီတာအခါ slope အနည်းငယ်သာပြောင်းလဲစေပါသည်။
အထက်ပါအချက်အလက်များကို APP ကို ​​"Geo Tracker" အတိအကျ mode ကိုဖို့ဂြိုလ်တု positioning ကိုကမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ အားလုံးနီးပါးကတ္တရာခင်းနှင့်အတူဆိုင်ကယ်လမ်းသွားအကြောင်းကို 2.3 ကီလိုမီတာ, သာ 50 မီတာအုပ်ကြွပ် (နှစ်ခုသောအရပ်တို့ကိုမ 50 မီတာစုစုပေါင်း) နဲ့အတော်လေး bumpy ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မအကြောင်းကို3နာရီနှင့် 14 မိနစ်ခန့်ကြာအောင် (အားလုံးနီးပါးဟာစကိတ်ဘုတ်စီးခြင်းပေါ်တွင်ရပ် ~ _ ~ "), တကယ့်ကိုအတော်လေးနာကျင်အတွေ့အကြုံဖူးလိမ့်မယ်။
ဤအချိန်ငါ ... ... ... အပြည့်အဝဖြင့်တရားစွဲဆိုဘက်ထရီ ~ ငါအိမ်ပြန်မယ့်အထိပေးပြီးတော့အခြားသောနေ့ရက်ကိုထပ်စမ်းသပ်ဖို့လိုချင်အတော်ကြာအချိန်, ဒီကယ့်ကိုအတော်လေးပုံမှန်မဟုတ်သောအသက်ပေတည်း, တဦးတည်းဘက်ထရီပေါ်, မှားမမြင်ရနှင့်အတူ 39,44 ကီလိုမီတာ ridded ... မည်သူမဆိုပါလျှင် (နှင့်ဘက်ထရီအထဲက run သောအခါ, လက်ဘက်ထရီအအေးဖြစ်ထွက်လှည့်ထိမိ, သာတဲ့ micro-အပူချိန်, တကယ်ကောင်း ~ ယင်းမော်တာ), ငါရပ်တန့်နှင့်မသွားဘဲလျှင်, မိုင်အကွာအဝေးပိုမိုမြင့်မားဖြစ်သင့်စဉ်းစား ဒီဘုတ်အဖွဲ့ကိုပိုင်ဆိုင်, ထို့နောက်သင်ကြိုးစားနိုင်ပါ။ ဒါဟာငါပေါ်မှာရပ်ထက်ပိုရှည်ဖြစ်သင့်သ စကိတ်စီး .
မြေတပြင်လုံးအပြောင်းအလဲနဲ့စဉ်အတွင်းကျနော်အများကြီးမြန်နှုန်းပြောင်းလဲမှုများနှင့်ဘရိတ် (ငါ၏အအရှိန်နှင့် deceleration နှင့်မြန်နှုန်းအကွာအဝေးအထက်ပါပုံမှာကြည့်ပါ) ရှိခဲ့ပါတယ်, ဒါကြောင့်ငါထုတ်လုပ်သူ, အတွေ့အကြုံအရသိရသည် (ကန့်သတ်ချက်အပေါ် 20KM မိုင်အကွာအဝေးအကွာအဝေးဖြစ်သင့်ကြောင်းယူဆ များသောအားဖြင့်လိပ်မြန်နှုန်းပေါင်းအဆက်မပြတ်မြန်နှုန်းနှင့်အတူလှပသောဒေတာထုတ်တိုင်းတာရန်, ဒါကြောင့်မယုံကြည်နိုင်ပါတယ်) ။ သို့သော်လည်းဤအကြောင်းကြောင့်စိတ်ကူးဤမျှငါ (ငါ 7.8 ကီလိုဂရမ်ကျင်းပရန်ရှိသည်ရုတ်တရက်ချွတ်ပါဝါလိမ့်မယ်ထင်ခဲ့ပါတယ်အချို့တမျးခဲ့ လျှပ်စစ်စကိတ်စီး အိမ်ပြန်ဖို့) ။
ဒါကြောင့်လဲကျနော် 12 နာရီလောက်မှာသည်အထိ ridded ဒီမှားယွင်းတဲ့အယူအဆ၏, လျှပ်စစ်ဓာတ်အားတကယ်ထွက်ကိုလောင်သောကြောင့်။ (သူဒေတာကိုသိတယ်ဒါကြောင့်ရှေးရိုးစွဲစာဖြင့်ရေးသားပါလိမ့်မည် ...... .. ငါတကယ်ပျောက်ဆုံးသွား), ဒါဟာငါမြန်နှုန်းခန့်မှန်းသည်ထက် 20km ပိုမြန် 20km ။ (ဒီဇာတ်လမ်းကစားမတိုင်မီပါဝါ display ကိုအလင်းအိမ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမှတ်မိဖို့, ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြ လျှပ်စစ်စကိတ်စီး, နှင့် "တိုင်းထုတ်လုပ်သူလှည်ဖြစ်ရမည်ဟုမယူဆကြဘူး) ။
သူတို့ထဲကလေးသောက်အဆိုပါစကိတ်စီးပေါ်ထိုင်ခဲ့ (ဦးပင်ပန်းအခါ Kart အဖြစ်ကစားပါကယ့်ကိုကြီးမြတ်ရဲ့)
ကိုးနာရီမှာအကြောင်းကို 26.8KM ၏အမြန်နှုန်းကန့်သတ်။
မော်တော်နဲ့ဘက်ထရီရဲ့အရည်အသွေးနီးပါးမျှ superheat ကောင်းသောချောမွေ့စီးနင်းဖြစ်ပါတယ်။
12mm ကျောက်စရစ်ဘီးအောက်မှာလည်းမရှိလျှင်, ဘီးခုန်ပါလိမ့်မယ်။
5mm ကျောက်စရစ်လည်းမရှိလျှင်, ထိန်းချုပ်မှုမထိခိုက်ပါဘူး။
ဒါဟာ affixed ဘီးဖြစ်စေခြင်းငှါကြမ်းတမ်းလမ်းမပေါ်တွင်အကောင်းတစ်ဦးအလိုက်အထိုက်နေတတ်, ဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိပါတယ်။
Post ကိုအချိန်: Sep-29-2017